Abakwa-Netcare bafaka itende lesimo esiphuthumayo njengoba izinombolo ze-Covid zikhuphuka e-Limpopo | Scrolla Izindaba
Abakwa-Netcare bafaka itende lesimo esiphuthumayo njengoba izinombolo ze-Covid zikhuphuka e-Limpopo
Ukwanda ngokuthelelana nge-Covid-19 kuphoqe isibhedlela se-Netcare Pholoso e-Polokwane ukuba sakhe itende elenziwa ngokwezifiso zokucubungula iziguli.
Lolu phiko lungamukela iziguli ezifika kwezingama-80, futhi selumiswe njengengxenye yohlelo lokulawulwa kwezinhlekelele esibhedlela.
Isikhulu esiphezulu se-Netcare uDkt uRichard Friedland uthe lokhu kuzokwehlisa umthwalo emnyangweni ophuthumayo esibhedlela futhi kusize ukuzinzisa iziguli ngaphambi kokulaliswa.
Uthe uphiko oluneziphephetha-moya ngokugcwele seluthole imvume kuNgqongqoshe wezeMpilo uPhophi Ramathuba.
“Lolu phiko luhlinzeka ngomoya wokuphefumula izikhungo zangasese nezindawo eziphephile lapho abahlengikazi nodokotela bengashintsha babe ngama-PPE abo. Sekutshalwe abasebenzi abengeziwe abangama-60 abazosiza esibhedlela,” kusho uDkt uFriedland.
Ngenkathi izinombolo ze-Covid zizamazama eNingizimu Afrika yonkana, i-Limpopo yaqopha ukuthelelana omusha okuyi-1,575 emahoreni angama-24 edlule – ukwanda okukhulu kusuka ku-900 ukwedlula umjikelezo odlule, nokwenyuka okuphezulu kakhulu okwamanje esifundazweni.
UNgqongqoshe uRamathuba uthe lezi zibalo ezikhulayo zikhombisa ukuthi izakhamizi bezingalandeli imigomo yokuphepha ye-Covid-19 ngesikhathi samaholide.
“Manje sesiyakhokha ngenxa yemibuthano yokuzijabulisa, amaphathi kaKhisimusi nezidlo zasemini, imishado namadili okuzalwa,” kusho uRamathuba.
URamathuba uthe isiFunda sase-Capricorn sisenabantu abaningi esifundazweni, ngokuthelelana okusha okungama-623.
Uthe uMasipala wase-Polokwane uhlala uqaphile. Isifunda sase-Vhembe naso sibone ukwanda okukhulu, ngokuthelelana okusha okungama-408. UMasipala wase-Thulamela yindawo okugxilwa kuyo elandelwa isiFunda sase-Mopani einokuthelelana okusha okungama-253, kuyilapho i-Greater Tzaneen ihlale iqaphile.
Ezindabeni ezingcono, isiFunda sase-Waterberg sasihamba phambili esifundazweni kepha izibalo azisakhuphuki ngesilinganiso esethusayo, njengoba kunokuthelelana okusha okuyi-189. URamathuba uthe lokhu kwenzeka naseSifundeni sase-Sekhukhune esiqophe ukuthelelana okusha okungama-98.